Home K ere Kachasị Akpụkpọ Ahịa Kachasị mma Kachasị mma na-akụda nri kichin
Ihe eji eme ụlọ kichin gị kwesịrị ịnwe isi iyi VIGA. A rụrụ nke ọma na ọkachamara na nrụnye ya dị mfe, akwa mmiri a mara mma ga-adọta ndị na-azụ ahịa na ndị na-ebugharị ihe ndị na-achọ faucet nwere ike ịme ha niile. Oghere na-adịghị ọcha, ebe a na-esi nri kichin a dị fechaa ma dị mfe ịwụnye maka ahụmịhe gbadara agbada site na ụlọ ọrụ ọkachamara na mmiri.
Ọ nwere oghere dị mfe itinye ma na-apụ apụ maka ụbọchị ọnụnọ. Ebe ọ bụ na nke a na-adaba na ọkpọkọ na-agbanwe agbanwe ma na-emesapụ aka, njikwa mmiri ga-abụ ndị na-eche banyere ndị ahịa gị oge gara aga. Igwe dị mfe dị na nozulu ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ ụdị ịgba ha chọrọ, kwa, na-eme nke a ịtụnanya maka nnukwu arụ ọrụ, azụmahịa na-agba agba ma ọ bụ ebe obibi.
Ọnụ ahịa asọmpi sitere na ndị na-emepụta kichin kichin maara nke a ga-enye ndị na-ere ahịa VIGA dị elu na-enweghị akwụ ụgwọ gị ogwe aka na ụkwụ, nke a ga-abụ nke ugbu a, nke ga-adị mma ma na-arụ ọrụ ọfụma awụsa ụlọ ahịa kichin kacha mma ị ga-eji kwadebe ndị ahịa gị. Zụlite lever ya dị mfe iji mee ka ọ na-eme ọfụma ka ọ wee mee mkpọpụta ahụ, enwere ihe maka mmadụ niile.
• Ndị na-emepụta pọmpụ kichin na-ewu ewu na ụdị na mma
• mara mma ma dị mfe maka kichin ọgbara ọhụrụ
• falọ mmiri VIGA bụ ogo kachasị mma maka obi ụtọ ogologo oge
Mbụ: Zoro Ezo Zoro Ezo Mara Mma Fulo
Next: Kwesịrị Ekwesịrị Chrome-Plated Down Kitchen Faucet